ICorning yonyusa inzuzo ngaphandle kokuthengisa kwe-iPhone esezantsi | IPhone iindaba
Utyikityo Corning ujongene ne- ukuveliswa kweGlasi yeGorilla edumileyoSithetha ngoluhlu lweekristali zezixhobo zeselfowuni ezinganyangekiyo ezihlala zihamba neetheminali zamanqanaba aphezulu, nangona ngenxa yekhathalogu ebanzi uCorning anayo, sifumana uluhlu oluphakathi olunoluhlobo lwezinto, nangona kwiinguqulelo zangaphambili kude kube sekupheleni.
I-Apple ithambekele ekusebenziseni iitekhnoloji zamva nje ezikhoyo kwimarike ukuzibandakanya kwi-iPhone yayo, kwanezinto esingenakuzixabisa njengeglasi elula. Nangona kunjalo, Ngaphandle kokuwa kwintengiso ye-iPhone kwihlabathi liphela, umthengisi uCorning unyuse inzuzo yakhe kunyaka ophelileyo.
Kwithiyori, inguqulelo yamvanje yeGlasi yeCorning Gorilla esemsebenzini yeyona ibekwe kwi-iPhone yokugqibela, ngaphandle kokuba iApple kunye neCorning benqabile ukuqinisekisa intsebenziswano esele iqhubeka iminyaka emininzi. Nokuba kunganjani na, le ithiyori eyandisiweyo, Kucacile ukuba i-iPhone isebenzisa iCorning Gorilla Glass nangona ingachazi ukuba yeyiphi imodeli okanye zeziphi iimpawu, ngakumbi ukubona ubulula apho i-iPhone X ikrwitshwe ngaphambili.
Inkampani iyiphucule inzuzo yayo kwaye ayipheleli kwi-fiber optics kunye neekristali ezithengisayo, kodwa nangeshishini lobuchwephesha obungenazingcingo be5G elingena kulo. Yiyo loo nto izabelo zenkampani zinyuke nge-5,4% kwixabiso xa kuthelekiswa nonyaka ophelileyo ukuya kwi- $ 32.
Icandelo layo le-fiber optic linike owona mvuzo mhle kwikota ephelileyo, emele ukukhula okupheleleyo okungama-26%.
Ekugqibeleni, inkampani ibonakalise ukukhula ukuya kwizigidi ezingama-399 Iidola, ezingalunganga ngokujonga "amanani amabi" e-iPhone, umthengi ophambili.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » ICorning yonyusa inzuzo ngaphandle kokuThengiswa kwe-iPhone esezantsi
I-10x17 Podcast: Ixesha leFace linika iApple ixesha elinzima